Waa maxay cilladaha isbeddelaya iyo sidee loo sameeyaa | Saadaasha Shabakadda
Maxay khaladaadka beddelayaan iyo sidee loo sameeyay
Maanta waxaan ka hadli doonnaa arrin la xiriirta saxanka tektonikada: beddelashada cilladaha. Jiritaankeedu wuxuu shardi ka dhigay sameynta noocyo farabadan oo nafis ah waxayna muhiimad weyn ugu leedahay cilmiga dhulka. Qoraalkan waxaad ku baran doontaa waxa qalad isbeddelku yahay iyo sida loo abuuro. Intaas waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa saameynta uu ku leeyahay cilmiga dhulka.
Ma rabtaa inaad ogaato wax kasta oo la xiriira guuldarrooyinkaas? Sii wad akhriska 🙂
1 Noocyada geesaha u dhexeeya taarikada
2 Soo helitaanka ciladaha isbeddelaya
3 Astaamaha ugu muhiimsan
4 Aaway cilladahaasi?
Noocyada geesaha u dhexeeya taarikada
Sida aragtida saxanka tectonics ay sheegto, qolofta dhulka ayaa loo qaybiyaa taarikada tectonic. Saxan kasta wuxuu ku socdaa xawaare joogto ah. Cidhifyada u dhexeeya taarikada waxaa ku yaal dhaqdhaqaaqa dhul gariirka oo kordhay awoodeeda khilaaf. Waxaa jira dhowr nooc oo geesaha ah oo u dhexeeya taarikada iyadoo kuxiran dabeecadooda. Waxay ku tiirsan yihiin in huurada la burburiyey, la abuuray, ama si fudud loo beddelay.
Si loo ogaado asalka cilladaha beddelka, waa inaan ogaanno noocyada geesaha ee ka dhex jira taarikada. Marka hore, waxaan helnaa geesaha kaladuwan. Dhexdooda, cidhifyada taarikada waxaa kala soocaya abuurista dabaqa badda. Ta labaadna waa cidhifka isku-xidhka halka laba taariko qaaradeed isku dhacaan. Waxay kuxirantahay nooca saxanka, waxay yeelan doontaa saameyn kale. Ugu dambeyntii, waxaan ka heli geesaha dadban, taas oo huurada lama abuuro lamana burburiyo.
Cidhifyada dadban waxaa ku jira culeysyo xiirid ah oo ka soo baxa taarikada. Taarikada waxay noqon kartaa badweyn, qaaradeed, ama labadaba. Cilladaha isbeddelka ayaa laga helay meelahaas taarikada ay u socdaan sida qaybo qaldan oo ku yaal xeebta badda. Bilowgii aragtidan waxaa loo maleynayay sidaas qulqulka badda waxaa lagu sameeyay silsilad dheer oo isdaba-joog ah. Tani waxay sabab u ahayd barakaca jiifka ah ee cilladda. Si kastaba ha noqotee, markii si dhow loo eegay, waxaa la arki karay in barakacu uu si sax ah u barbar socday cilladda. Tani waxay ka dhigtay in jihada lagama maarmaanka u ah soo saarista barokaca xeebta badweynta aysan dhicin.
Soo helitaanka ciladaha isbeddelaya
Cilladaha isbeddelka ayaa la helay waxyar ka hor inta aan la soo bandhigin aragtida plate tectonics. Waxaa helay saynisyahan H. Huzo Wilson sanadkii 1965. Wuxuu ka tirsanaan jiray Jaamacadda Toronto wuxuuna soo jeediyay in cilladahan ay ka xirmaan suumanka firfircoon ee adduunka. Suumankaasi waa cidhifyada kala geddisan ee kala geddisan ee aan horay u soo aragnay. Dhamaan suumanka firfircoon ee caalamiga ah waxay ku midoobeen shabakad isdaba-joog ah oo dhulka dushiisa u qaybisa taarikada adag.
Sidaa darteed, Wilson wuxuu noqday saynisyahankii ugu horreeyay ee soo jeediya in Dhulku ka kooban yahay taarikada shaqsiyadeed. Isaguba wuxuu ahaa kan bixiyay aqoonta ku saabsan barakicinta kala duwan ee ka jirta cilladaha.
Inta badan cilladaha isbeddelka waxay ku biiraan laba qaybood oo ah badweynta dhexe. Cilladahaani waa qeyb ka mid ah khadadka nasashada ee qolofka badda ee loo yaqaan aagagga jabka. Aagagani waxay ka kooban yihiin cilladaha isbeddelka iyo dhammaan kordhinta ee ku sii shaqeynaya saxanka dhexdiisa. Aagagga jabka waxaa laga helaa 100 kiilomitir kasta oo ku teedsan cirifka badweynta.
Cilladaha isbeddelka ee ugu firfircoon ayaa ah kuwa laga helo oo keliya inta u dhexeysa labada qaybood ee barokaca ah ee cirifka. Dabaqa sare ee badda waxaa ku yaal qayb ka mid ah wiishka u dhaqaaqa dhinaca ka soo horjeedka dabaqa badda ee la soo saaray. Markaa inta udhaxeysa labada qaybood ee labada geesood labada taarik ee isdhaw waa xoqayaan markay safrayaan ciladda.
Haddii aan ka fogaanno aagga firfircoon ee cirifyada xagjirnimada, waxaan helnaa aagag aan firfircooneyn. Meelahaas, jabka ayaa loo ilaaliyaa sidii inay ahaayeen nabarro cimilada ah. Jihaynta aagagga jabay waxay la siman yihiin jihada dhaqdhaqaaqa saxanka xilligii la sameeyay. Sidaa darteed, qaab-dhismeedyadan ayaa muhiim ah marka la dejinayo jihada dhaqdhaqaaqa saxanka.
Doorka kale ee isbeddelada cilladaha waa in la bixiyo habka loo gooyo badda, taas oo lagu abuuray cirifka geeska, waxaa loo qaadaa meelaha burburka. Meelahan ay taarikada ku baaba'aan oo dib loogu soo celiyo gogosha Dunida waxaa loo yaqaan godod badeed ama aagag hoos yimaada.
Inta badan cilladaha isbeddelka waxaa laga helaa berkadaha badda dhexdeeda. Si kastaba ha noqotee, sidaan hore u soo sheegnay. waxaa jira geesaha taarikada kala duwan. Sidaa darteed, cilladaha qaarkood waxay ka gudbaan qolofka qaaradda. Tusaalaha ugu caansan waa khaladka San Andreas ee California. Ciladan ayaa sababa dhulgariir fara badan oo ka dhaca magaalada. Taasi waa aqoonta uu u leeyahay in filim loo sameeyay jilitaanka burburka keenay.
Tusaale kale ayaa ah cillada Alpine ee New Zealand. Khaladka 'San Andreas' wuxuu isku xiraa xarun ballaarin oo ku taal Gacanka Kalifoorniya iyo aagga hoosaadka Cascade iyo Mendocino Transforming Fault, oo ku yaal xeebta Waqooyi-galbeed ee Mareykanka. Saxanka Baasifigga oo u socda jihada waqooyi-galbeed iyadoo ay la socoto dhammaan qaladka San Andreas. Si loo raaco dhaqdhaqaaqan socda, sanadihii la soo dhaafay aagga Baja California waxay noqon kartaa jasiirad gooni ah laga bilaabo dhammaan xeebta galbeed ee Mareykanka iyo Kanada.
Tan iyo markii ay tani ku dhici doonto qiyaasta juquraafi ahaan, ma aha wax aad u muhiim ah in laga walwalo hadda. Maxay tahay walaac buuxda waa dhaqdhaqaaqa dhul gariirka ee dhaliya cilladda. Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo badan oo dhul gariir ah oo ka dhaca aagaggaas. Dhulgariirradu waa kuwa go’aamiya musiibooyinka, khasaaraha hantida iyo nolosha. Dhismayaasha San Andrés waxaa loo diyaariyey inay hor istaagaan dhulgariirka. Si kastaba ha noqotee, iyadoo kuxiran halista xaaladdu, waxay sababi kartaa masiibooyin dhab ah.
Sidaad u aragto, dhulkeena iyo qolofta badweynta way adagtahay in la fahmo. Hawlgalkeedu aad buu u adag yahay oo baadhitaankiisu wuxuu noqdaa mid loo baahdo. Macluumaadkan waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan cilladaha isbeddelka iyo saamaynta dhulka iyo gargaarka badda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Maxay khaladaadka beddelayaan iyo sidee loo sameeyay
Noocyada dhagaxa, samayska iyo astaamaha
Waa maxay iyo sidee baa loo sameeyaa guyots?